Buy Handy Stitch (10,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
✂ Handy Stitch လက်ကိုင် အပ်ချုပ်စက် ?
? လက်တစ်ဖဝါးစာ တစ်ထွာမျှ စက်ကလေး ဖြစ်သော်လည်း မော်တာအပ်ချုပ်စက်ကြီးများ၏ တဝက်မျှမက စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။ ခရီးဆောင်၊ အိပ်ဆောင် ပြုလုပ်ထားပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း၊ မြန်ဆန်ခြင်း၊ တန်ဖိုးနည်းခြင်း တို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ အသုံးများ တွင်ကျယ်သည့် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
? အပေါက်အပြဲဖာခြင်း၊ ဘောင်းဘီ စကတ်တို့ကို အနားလုံးခြင်း၊ လက်ကိုင်ပုဝါ၊ စောင်ပါး၊ အိပ်ရာခင်း တို့ကို အနားကွပ်ခြင်း၊ ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးထည့်ခြင်း၊ ထမီ အထက်ဆင့်တပ်ခြင်း စသည်တို့သာမက ပီနံအိတ် အသေးလေးများကိုပင် အိပ်ပိတ်စက်ကြီးနှင့် ချုပ်/ပိတ်သလို ချုပ်နိုင်ပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် အပ်ချုပ်စက် အကြီး ရှိသူများပင် အမြန်ချုပ်၊ အလွယ်ချုပ်၊ အနားသတ်များ အတွက် ဤစက်ကလေးကို သုံးကြ ပါသည်။
အမည်: Handy Stitch